Top 10 kamaradaha Motion gaabis ah
Kamaradaha xawaaraha sare si fiican u yaqaan for qaababka ay la yaab leh taas oo kaa caawin in ay qabsadaan daqiiqado mooshin gaabis la ah si kaamil ah. Dad badan way wareersan yihiin sida in ay kaamarooyinka u fiican u qabashada mooshin gaabis ah. Halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 10 kaamaro oo arkaa in ay yihiin waxa ugu fiican qabtay daqiiqado xusuus ah aad noloshaada in hab mooshin gaabis ah.
The Cannon Powershot S100 u shaqeeya a gashto kala duwan 24-120mm 5x u dhigma awoodda zoom. Waxaa sidoo kale DIGIC 5 processer ka Canon EoS dambeeyay image. The S100 ee tilmaame image waa 12.1 MP ah 'dareen sare' CMOSka ee 1 / 1.7 "qaab-dhismeedka, tani waxay u oggolaanaysaa in ay u qoraan dhamaystiran filimada HD ee 1920x1080 oo tayo leh, iyada oo natiijada framerate 24P ah.
Advantage: tayada Greater heerka wax yar ka fiican khafiif ah dareenka.
Qasaaro: Waa yara qaali ah.
Tani waa "zoom safarka" digicam la xiriir dheer oo GPS, oo waxay bixisaa lacag ka yar siyaabaha gaabis-dhaqaaq la mid ah la image xoogaa yar hoos.
Faa'iidada: goyn karo oo ka kharash yar ka badan oo kale oo si tartiib ah kaamirooyin dhaqdhaqaaqa. Image Aad u fiican oo tayo leh movie weyn.
Qasaaro: awoodda batariga Low, gaar ahaan GPS logger.
Digicam Tani waxay qaadi kartaa HD (720p) video clips ee 120fps iyo heerka VGA (640 x 480) filimada ee 240fps. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira tusaalooyin badan oo ku saabsan YouTube. Si kastaba ha ahaatee, tani waa camera a yara qaali u qabashada mooshin gaabis (£ 429) oo aan kamarad khafiifa.
Advantage: awooda batariga Great.
Qasaaro: jidhkaaga oo dhan caaga.
Tani 320 x 240 p at 220fps isticmaalaya qaab-dhismeedka JPG dhaqdhaqaaqa, taas oo abuuraa files badan noocyada movie AVCHD / H.264 joogto ah.
Advantage: Simple in ay isticmaalaan iyo dareemayo si fiican u dhisay
Qasaaro: Doorashada Full HD movie doorashooyin Diiwaangelintu waxay keeni kartaa.
Iyada oo ka sareeya-dhigsan bandhigay, viewfinder OLED ah iyo jeer dareen-celin dhaqso, Lumix Panasonic ee G6 waa kor ku xusan oo dhan digicam badan oo xiiso leh si ay u isticmaalaan badan G5 ah. On hababka kale, waxaa uusan waxba iska badalin badan. Waxaa weli nooc ka mid ah "mini-SLR" in si fiican ayaa hoggaamisa oo taas oo inta badan qabtaan shaqo aad u fiican, xitaa haddii awooda batariga laga yaabaa inuu ka fiican. Waxaa mudan in helitaanka haddii aadan hore u leedahay mid ka mid ah khayrka ay dhawaan.
Advantage: jawaabid Wanaagsan
Qasaaro: nolosha awooda batariga niyad
The Olympus stylus qalinka SH-1 bixisaa badan oo awood zoom in digicam si fudud ku haboon in aad gacanta. Iyada oo tilmaame 16-megapixel iyo 24X awood zoom muuqaal, kartaa in aad guriga ku saabsan mawduuc fog iyo qabtaan fiiqan, tayo sare leh images meel fog.
Sidoo kale SH-1 Hawlaha hormartay 5-dhidibka image muuqaal dejinta, si aad u kordhin kartaa si dhamaystiran 24X zoom muuqaal awood kala duwan camera digital iyo weli heli fiiqan, gilgil-free sawirada. Taasi noqonayaa mid ka qiimo badan marka aad rabto in aad si deg deg ah ku qabtaan, iyadoo la isticmaalayo camera digital ee hillaacu-degdeg ah 11.5 per taageero labaad si ay ula qabsadaan mawduuc ee dhaqdhaqaaqa.
Advantage: bandhigay technology Touchscreen oo uu leeyahay jirka ah oo aad u khafiif ah oo dhan.
Qasaaro: tayada Screen yar tahay oo uusan jirin doorasho diiradda buuggan.
The Casio Exilim ZR200 waa superzoom camera ah oo khafiifa in madadaalo iyo xiiso leh sida caadiga ah si ay u isticmaalaan. Waxaa si degdeg ah u bilaabaan ilaa iyo u baahan tahay images hawlaha guud u fiican. Tayada Picture waa mid aad u macquul ah, laakiin ma caawin kartaa fikirka camera digitalka dhiman xiriir qaar ka mid ah hal-abuur si ay u caawiyaan taagnaato oo ka soo baxay barwaaqada ay kuwa lagu daydo kale oo ku saabsan suuqa.
Advantage: Good dhismaha, nolosha awooda batariga aad u fiican
Qasaaro: xaddidan goobaha aperture
The Nikon 1 J4 yeelan doonaan dhib ma helo caashaqi jiray, in ay iska istareexsan-of-isticmaalka, touchscreen, ka jawaabid weyn, design miisaanka yar oo fudud mahad.
Advantage: bandhigay screen Touchscreen oo la dhisay-in Wi-Fi
Qasaaro: tayada sawirka la yaabka leh xitaa in xaaladaha iftiin yar yahay
Nikon Coolpix S9700 u muuqataa in ay wax walba waxay u baahan tahay si ay u tartamayaan 2014 ee uwadida sare superzoom, la 30x xiriir ah, Wi-Fi, GPS oo ah user interface user-friendly.
Advantage: Dhammaataan loogu talagalay bedeley user-friendly
Qasaaro: No function anfacaya si uu si fiican loo isticmaalo gashto 30x zoom awoodda
Small ku filan oo ay ku haboon dhammaataan in jeebka laakiin awood ku filan si ay u dhiiri sawir qaadayaasha ugu adag, waxay si dhab ah u taagan in daqiiqado low-light oo dhakhso u tallaabo. Its f aalladda-soomi / 1.8 gashto lagu daro CMOSka tilmaame image weyn awoodiisa low-light oo xiiso leh, heerka sare Qabsashada degdeg ah oo xawaare ilaa 10 taageero per goobaha asalka labaad iyo Lafawayn tashwiish. Oo la wareegtay aan soo bandhigay in guriga, dhacdooyinka fiidkii, ee aroosyada-xitaa marka nalalka ku daranyihiin-ka dibna naftaada yaabiyo sida sanamyadiinna markiiba soo muuqan ee aad taleefan smart ku haboon ama kiniin ah ee la xiriira in ay kala hadlayaan. Soo-ogoow quruxda sawir digital low-light.
Advantage: image Good ilaa 800 ISO
Qasaaro: flash kala duwan Little
Sida loo sameeyo Video ah aan Camera ah
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Leica
Camera Casio Photo Recovery Guide
> Resource > Camera > Top 10 kamaradaha Motion gaabis ah